Roahana Amin’izay ny Lalànan’ny Fanalam-baraka Tamin’ny Vanim-potoanan’ny Fitondrana Jadona Miaramila, Hoy Ireo Mpikatroka Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Roahana Amin'izay ny Lalànan'ny Fanalam-baraka Tamin'ny Vanim-potoanan'ny Fitondrana Jadona Miaramila, Hoy Ireo Mpikatroka Ao Myanmar
Voadika ny 08 Febroary 2017 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Português, Italiano, English
Mpikambana ao amin'ny Komity ho Fanitsiana ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra mivory hanao antso fanesorana ny lalàna andininy faha 66(d) nampiady hevitra. Sary avy amin'ny pejy Facebook The Irrawaddy, miara-miasa amin'ny Global Voices.
Resy tamin'ny fifidianana taona 2015 ny governemanta tohanan'ny miaramila ao Myanmar, kanefa mbola lalàna ao amin'ny firenena ny fepetra izay nampihariny mba hampanginana ireo mpanohitra .
Anisan'izany ny “Lalànan'ny Fifandraisandavitra,” izay lany tamin'ny taona 2013 ho fampiroboroboana ny fampiasam-bola vahiny eo amin'ny sehatry ny Teknolojiam-baovao sy iarovana ireo mpanome tolotra sy ny mpampiasa teknolojia. Fa na dia teo aza izany tanjon'ny lalàna mazava tsara izany, dia maro ireo manampahefana no mampiasa ny andininy faha 66 (d) ho fitaovana ara-pitsarana hiampangana ny fanalam-baraka amin'ireo mpitsikera azy ireo.
Hatramin'ny nahalanian'ny lalàna, raharaha fanalam-baraka miisa 48 no naharaisana fitarainana tany amin'ny fitsarana ka mifandraika amin'ny andininy faha 66 (d) amin'ny lalàna. Tamin'ny herintaona, na dia efa ny antoko mpanohitra teo aloha ao amin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demokrasia aza no nandray ny fahefan'ny governemanta, dia mbola nisy olona miisa 29 ihany no voasambotra noho ny fandikana io lalàna io.
Milaza ny andininy faha 66 (d) fa mety ho “voasazy hatramin'ny telo taona an-tranomaizina, ary mety handoa onitra na izy roa miaraka ireo rehetra izay mampiasa ny ” tambajotra-pifandraisandavitra hakana vola amin'ny tsy rariny, hanaovana fandrahonana, fanakanana, fanalana baraka, fanakorontanana, fanentanana tsy araka ny tokony ho izy , na fampihorohoroana”.
Ho an'ny ankamaroan'ireo mpikatroka sy mpanao gazety, manjavozavo ny teny nampiasaina tao anatin'ity fizarana ity ary azo adika ho fiampangana fotsiny ireo rehetra izay manala-baraka olona iray hafa.
Nanomboka tamin'ny taon-dasa, nahazo laza ratsy noho ny maha fitaovana ara-pitsarana ampiasain'ny manampahefana miaramila ambony hanenjehana ireo mpitsikera azy tamin'ny fanehoan-kevitra maro sy ny media sosialy ny fizarana faha 66 (d).
Na dia teo aza ny faharesen'ny antoko izay notohanany tamin'ny fifidianana, mbola manohy mampiasa ny fahefany lehibe ao amin'ny fitantanan-draharaha ihany ny miaramila. Manome antoka amin'ny fametrahana solontenan'ny miaramila ao amin'ny parlemanta sy ny Kabinetra (governemanta) ny Lalàmpanorenana izay nolaniana tamin'ny taona 2008.
Raha manahy momba ireo raharaha vokatry ny andininy faha 66 (d) miha-mitombo isa, dia misy mpikatroka, manam-pahaizana, ary mpanao gazety nanangana ny Komity ho Fanitsiana ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra (CATL) mba handresen-dahatra ny parlemanta amin'ny hanavaozana maika ny lalàna.
Nilaza izy ireo fa tsy ilaina ny andininy faha 66 (d) satria efa voasaron'ny fepetra efa misy ao amin'ny Fehezan-dalàna famaizana ny fanalam-baraka .
Nanoritra ny CATL fa azo gadraina tsy manana ny zo ho afaka vonjimaika ny olona iray voampanga ho nanao fanalam-baraka eo ambanin'ny Andininy faha 66(d). Afaka mametraka fitoriana amin'ny anaran'olona iray hafa ihany koa ny olona iray fahatelo, izany no manazava ny antony mahatonga ny raharaha sasany mahakasika miaramila tsy ny manampahefana avy amin'ny miaramila no mametraka fitoriana fa sivily .
Ao Burma, mandray an-tànana ireo olona mitsikera azy ireo amin'ny Lalàna Andininy faha-66 D ny governemanta NLD. TSY ILAINA NY 66D HOY IZAHAY.
Mino i Bo Kyi ao amin'ny Fikambanana Manohana Ny Fiarovana ara-politika fa azo atao malefaka kokoa ny sazin'ny fanalam-baraka:
Tokony hoesorina ny andininy faha-66 (d) amin'ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra, tsara kokoa izany amin'ny hoavin'ny firenena raha miezaka mamaha ny olana amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra amim-paharetana isika sady mandrisika ny kolontsain'ny demaokrasia sy mitady ny marimaritra iraisana avy amin'ny antokon'olona rehetra.
Nanaiky ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona U. Robert San Aung fa tokony hasiana fanitsiana ilay lalàna :
Tsy mety raha miatrika fitsarana ny olom-pirenena iray mitsikera olona iray mahery kokoa noho izy .
Nahita ilay mpikatroka Ko Maung Saung Kha fa nofantenana ho ampiasain'ireo manampahefana ny andininy faha 66(d) raha lasa manjaka ny teny fankahalana ara-pivavahana sy ny fanitsakitsahana an-tserasera atao amin'ny vehivavy :
Tokony hanontany isika hoe nahoana ity lalàna ity no tsy manan-kery amin'ireo manaparitaka teny fankahalana ara-pivavahana an-tserasera. Misy ireo fanitsakitsahana an-tserasera atao amin'ny vehivavy kanefa tsy afa-misoroka izany ity lalàna ity. Amin'ireo izay manevateva ireo mpitondra fanjakana ihany no manankery ny lalàna… Nampiasain'ny tsimatimanota ny lalàna .
Tondroin'ilay mpikatroka amin'izany ny fitomboan'ny fihetseham-po anti-Miozolomana ao amin'ny media sosialy izay notarihan'ny Bodista mahery fihetsika. Maro an'isa ny mponina Bodista ao Myanmar. Miampanga ny Miozolomana amin'ny firaisana tetika hamindra ireo mponina Birmana hiala amin'ny vondrom-piarahamoniny ireo Bodista mpitrifana sasany.
Ankoatra ireo mpiasam-panjakana, nampihatra ny andininy faha 66(d) amelezana ireo mpanakiana sy ny mpandoto rindrina an-tserasera ao amin'ny media sosialy ihany koa ireo olon-tsotra. Nanazava ny fiantraikan’ny lalàna teo amin'ny fitondran-tenan'ny mpisera maro tao Myanmar i Moe Thet War, mpanoratra :
Hatramin'ny namoronana ny Andininy faha 66(d), lasa misalasala ireo olom-pirenena rehefa hizara zavatra na inona na inona ampahibemaso ao amin'ny Facebook, eny fa na dia manondro ny asa ratsin'olon-kafa aza izy ireo.
Nampiasa ny sariitatra etsy ambany i Moe Thet War mba hanazavana ny fomba hiampangan'ny mpangalatra iray ny mpisera Facebook ho manao heloka bevava raha mandefa sary “manivaiva” eo amin'ny sehatry media sosialy malaza ity farany.
Mamintina tsara ny Andininy faha 66(d) amin'ny Làlanan'ny Fifandraisandavitra ity sariitatra ity.
Nanomana famoriam-bahoaka tany amin'ny tapaky ny volana Janoary ny CATL mba hanerena ny fanesorana ny Andininy faha 66(d). Ho setrin'izany, nilaza ny parlemanta fa vonona ny hanitsy ny lalàna sy hijery ny fiantraikany ratsy amin'ny Andininy faha 66(d).